Ukuxosha: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Umzimba obuthakathaka uyisignali yokubonakala kwe-thrush. Futhi akukho isiqinisekiso sokuthi ngeke abheke kuwe. Kodwa uyazi - wonke umuntu angazivikela ngokwakhe! Ngakho, thrush: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa - isihloko "esigulayo" kwabesifazane abaningi. Xoxani?
Izibalo zifakazela: Amaphesenti angama-75% abesifazane abathandekayo bahlangana ne-candidiasis yesisu (i-milkwoman) okungenani kanye empilweni yabo, futhi ngo-40-45% wabo, iqala kabusha ngemva kwesikhathi. Ukuvimbela lokhu kungenzeki, udinga ukuqinisa umzimba, ngoba uma isimiso somzimba sokuzivikela sisinciphisa, i-thrush ikhumbuza ngokushesha. kuyadingeka ukuba udle kahle futhi, eqinisweni, ugweme konke okusiza isikhunta esibi-ukhetho oluzogxila esiswini.
I-microflora yemvelo yesiswini i-95% eyakhiwe i-lactobacilli, ikhiqiza i-lactic acid - isici sokuzivikela esingokwemvelo ngokumelene nefungi esibangela i-thrush. Baqala ukwandisa ngenkuthalo lapho inani le-lactobacilli linciphisa. Lokhu kwenzeka uma uthatha ama-antibiotics, ukuvimbela imithi kanye nezinye izidakamizwa, usebenzisa i-intrauterine idivaysi, izifo ezithile nezifo, ngeshintsho emazingeni ama-hormone ahlobene nokukhulelwa noma ukuyeka esikhathini.
Izingozi zegazi zibandakanya u-douching ovamile kanye nama-douche wesifazane, ama-hot hot, ama-alkaline (ukuqhuma okukhulu) kwemikhiqizo yokuhlanzeka komuntu siqu, ukubhebhetheka kwezingubo zangaphansi zokugqoka ezihambisana nokusebenza okunamandla lapho umzimba ungaphefumuli khona (ukutholakala kwe-oksijini emzimbeni wesitho sangasese kuvimbela ukukhulelwa kwe-Candida fungi ).
Uyakuthanda okomnandi nofulawa? Yeka uthando! Okwokuqala, kuyingozi esikhwameni, futhi okwesibili, ushukela uyisidingo esithandayo somsoco we-pathogen ye-thrush. Uke wazizwa yini isifiso esingenakuphikiswa sokuthumela uswidi uswidi emlonyeni wakho? Lungisa indlela yakho: hamba uye ekhishini, kodwa ekamelweni! Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ukukhuluphala ngokweqile kungenye yezici eziyingozi zokushukela, futhi umsebenzi wezocansi kuyindlela enhle kunazo zonke yokuyivimbela!
Siqaphele ukuthi emva kobusuku obunzima, izwe elizungezile liqala ukukhanya ngemibala egqamile, futhi ngisho namaqanda othosiwe akhonza embhedeni owathandayo, kubonakala sengathi yisidlo esikhulu kakhulu. Isihawu kuphela ukuthi akazange acabange ukwakha isaladi elula - ukuntuleka kwamavithamini emzimbeni wesifazane kunomthelela ku-candidiasis!
Gcwalisa isidingo samavithamini kuma-pharmacy complexes futhi uphuze izindebe ezimbili zeizhenka, i-kefir noma i-yogurt nsuku zonke. Imikhiqizo yobisi oludinga usizo kusiza ukugwema ukunyuka kwamathumbu emathunjini. Futhi empeleni kuzo zonke izizathu eziningi zokuvela kwe-thrush zifihliwe. On the background yayo thrush kulula ukuthuthukisa. Odokotela bayichaza lokhu ukuthi umzimba wonke uhlangene: uma amabhaktheriya engatholakali ohlelweni lokugaya, i-microflora yesisindo ingashintsha kalula.
"UKUHLELA I-SOAP YE-ANTIBACTER: ikhuthaza ukukhula kwe-fungal fungal infection. Umbala, onobuqili obunamandla nawo awufanelekile ukuhlanzeka. Nika insipho yesana, noma i-gel kangcono ezindaweni eziseduze.
UNGAKUTHI UKUTHANDA UKUQALA, NGAPHAMBI KWENKULU YOKUPHILA. I-Foam, i-shampoo, izithasiselo ezivuthayo zicasula i-mucosa evuthayo.
»SEBENZISA I-SOFT YOKUPHILA IPHEPHA lekhwalithi elihle. Grey futhi kanzima kungalimaza izindawo ezivuthayo, futhi ezinemibala nangenhlawulo emnandi kuqinisa ukucasuka.
»KUFANELE UKUHLELA IZINQUBO ZOKUSUKA KOTTON, kanye ne-pantyhose - nge-gusset eyenziwe ngendwangu yemvelo.
"KUKHULUMA ABANTU ABAHLULELE KANYE NABASEBENZI. Susa umtimba wezingubo zangaphansi zokudonsa.
"UNGAKUTHI UKUTHOLA IZINDAWO ZOKUPHILA OKUFANELE KAKHO. Isibonelo, ukusheshisa ukutakula okubandayo. Asebenzi ama-virus, kodwa abangela i-dysbacteriosis, lapho i-microflora evamile iphela khona, futhi indawo yayo ku-vagin ihlala isikhunta esibangelwa i-thrush.
Abaningi bakholelwa ukuthi i-thrush iyinkinga yowesifazane kuphela. Kungakhathaliseki ukuthi kuyini! Ukuphulukiswa kwalokhu kutholakala kuyadingeka kanye nomlingani (emva kokuvela ku-thrush noma yimuphi umuntu ongekho inshuwalense, igama kuphela kulo noma elinye - "i-candidiasis balanoposthitis"). Igama lezokwelapha elihlukile le-thrush "yi-candidal vulvovaginitis." Futhi nalesi sifo, kwenzeka izimo ezimbili.
Konke kuyodlula ngaphandle kwemithi, izimpawu ziyophela, kodwa lapho kuqala ukuya esikhathini noma ngaphansi kwethonya lenye into ekhubaza, i-thrush izobuya kakhulu. Ukuze ungahambi embuthanweni, ngokushesha uvakashele isiguli somzimba bese uqala ukwelashwa.
Ukuqothulwa kugxilile emzimbeni wobulili: ngaphambi kokuba ifilimu emhlophe iphenduke iphuzi, iba yinde kakhulu, iyomile. Ukuqhekeka kwebhubhisini elingenalutho lomzimba wesifazane, lizoshiya ngemuva kwezinkinga, ukuphahlazeka nokulonda. Ukuhlakulela kuyobe kungenakubekezeleleka, kubuhlungu, ubulili ngeke bube injabulo. Akusikho ngaphandle kokuthi e-United States milkwoman ibizwa ngokuthi umbhubhisi wempilo yomndeni. Phuma esisodwa - phuthuma udokotela kanye nabathandekayo bakho: udinga ukususa imvubelo yedwa. Amakholoni e-fungal ahlala emaphethweni ejwabu, ngokuxhumana naye ngokocansi, ukwandisa inqubo yokuvuvukala esiswini, kanye nesidoda - isisindo esihle kakhulu somsoco kubo.
Ngendlela, ukwelashwa okuhlangene, ama-cream kanye namaphilisi kungcono kakhulu. Uma oshade naye engadingi ukwelashwa, ungasebenzisa amakhandlela noma, ezimweni ezingavamile, ukuvumelanisa.
IMPILO - ukwelashwa kwesisindo ngesisombululo samathebulethi enamandla "Levorin", i-borax ne-glycerin, ngezinye izikhathi i-aniline amade, ngokwesibonelo i-methylene eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngaphezu kwalokho indlela ishibhile kuphela.
I-Cons - ingabandakanyeki ekuvumelaneni, njengoba lokhu kuholela ekususweni kwe-lactobacilli ezuzisayo kusukela emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, sekude futhi kungakhululekile. Futhi akukho isiqinisekiso sokuthi uzophulukiswa okokuqala.
Amathebula, ama-CAPSULES - "Flucostat", "Miconazole", "Diflucan", "Macmirror", njll.
Izinzuzo - okusheshayo, ezisebenzayo, ezilula nezanamuhla. Ukuze ukwelashwa kwe-thrush ezimweni eziningi, i-capsule eyodwa yanele: igwinya - futhi akukho ukuhlukunyezwa!
Amagciwane - lezi zidakamizwa azithengi, nazo zizithatha ngaphakathi, ngenxa yokuthi isibindi nezinso kufanele zisebenze ngokucindezeleka okukhulu. Endleleni yokwelashwa, ukuqonda ukunambitheka kwesinye isikhathi kuphazamiseka futhi kukhona umuzwa wokufutheka emlonyeni, nakuba lezi zenzakalo zidlula ngokushesha.
I-CANDLES, ama-MAZI nama-CREAM nge-levorin, i-nistatin, i-clotrimazole, i-mycosolone nezinye izinto ezisebenzayo.
Imikhiqizo - umphumela osheshayo futhi onokwethenjelwa: eminye imithi yendawo yesizukulwane esisha ilashwa i-thrush ngosuku, konke-ngezinsuku ezingu-3-6.
I-Cons - ukuze kuqinisekiswe ukutakula ngokugcwele, inkambo yokwelashwa kufanele yenziwe kabili. Isimiso esisebenzayo - i-antifungal antibiotic ngokusebenzisa i-membrane yamangqamuzana yesisu isangena egazini futhi inomthelela omubi esibindi (nakuba kungaphansi kwesilinganiso sokungenisa). Lezi zixazululo ezinjalo ngezinye izikhathi zingashiya ama-greasy stains ku-laundry.
Nge candida intertrigo, abesifazane abaningi abagcwele bazibonele ngokwabo. Ikakhulukazi ngenkathi ebandayo, lapho kufanele ugqoke izingubo ezifudumele, kanye nangesikhathi sokuqina. Isikhumba emagqumeni afunga, siphuca ngaphezu kokujwayelekile, futhi i-fungus evamile ihlezi eceleni. Abantu abasengozini kakhulu ngesikhathi esifanayo yizindawo ezingenalutho, izindawo ezingaphansi kwebele kanye nezikhathi phakathi kweminwe. Isihluthulelo sesikhumba, njengokungathi sishisiwe, siguqukile, siyabukeka. Ungayilethi kulokhu! Ekuqaleni kwenkinga, kabili ngosuku, phatha izindawo ezinenkinga nge-cream yokufakelwa, i-zinc unamathisela noma isisombululo, bese usebenzisa i-powder.
"Ungagqoke izingubo zelineni nezama-synthetic. Khetha izinto kusuka kukhonti nelineni, ezithatha kahle umswakama futhi uvumele isikhumba ukuba siphefumule. Ngokwe-infungal fungal ngaphansi kwezicubu zemvelo, kunethuba eliphansi lokuphindaphinda.
"Ngaphambi kokufaka into entsha, ikakhulukazi enemibala, kudingeka uyihlanze ngokuphelele. Le nqubo izodambisa izicubu, isuse ama-dyes namakhemikhali angabangela ukucasula isikhumba.
"Gqoka ama-leggings anamandla noma ama-shorts ama-shorts ayenziwe ngejezi yekotini ngokungeziwe okungenani kwe-lycra (angabi ngaphezu kuka-3%). Ngosizo lwabo, ukungqubuzana kwezinhlangothi zokuxhumana zomzimba ngesikhathi sokuhamba, kugijima futhi ngesikhathi sokuqeqeshwa kwehla. Uma ukugcwala ngokweqile, bhanca izingxube zezintambo ezixubhayo emadolweni nge-bandage elashekile, kodwa ungadluli.
"Thatha amaminithi angu-15-20 ngosuku usuku lokugeza nge-baking soda (i-tablespoons amaningana ngevolumu evamile) noma uviniga u-6% wetafula (ilitha ngalinye lokugeza), ukususa ukucheka nokuvuvukala, kanye nokuxuba kwamakhambi okwehlisa ukujuluka nokucasula isikhumba.
"Hlanza izindawo ezinenkinga ngama-anti-vacuumant anti-sprayants nge-aloe nezinye izicucu zezitshalo ezinciphisa ukujuluka.
Uma amanzi yinto engokwemvelo yezandla zakho, yazi: i-thrush ayilali! Umswakama unganciphisa isikhumba bese wenza kube lula ukuthola ukutheleleka kwefungal. Umphumela ungaba lusizi - i-candidiasis yama-perio oral grooves. Isikhumba esizungezile sivuvukala, sibomvu futhi sinzima kakhulu. Ukuvutha kuvame ukuphonswa ngezipikili: baba mncane, banomzimba omncane, baba mnyama futhi bahlambalaza.
"Sebenzisa ama-gloves enjoloba, futhi emva kokuxhumana isikhathi eside ngamanzi, ungakhohlwa ukugcoba izandla zakho nge-cream e-antifungal.
Ingabe isikhumba soma? Abafuni ukuphulukisa imifantu ebuhlungu? Lokhu kwenzeka nge-mycosis. Gcina engqondweni: amakhowe yisifo esibi kunawo wonke i-asidi! Zama ukuxubha i-rhubarb igxila ku-gruel, amajikijolo amnyama ama-currant, ama-plums ama-apum noma ama-apula nokugcoba izandla zakho. Ngemuva kwezinsuku ezingu-4-5, isikhumba sizoba sesisha!
I-Zaeda (ukuphahlaza emaceleni ezindebe) yisinye isono se-Candida. Zama ukukhumbula, emva kwalokho zivele zivele. Uke wathatha ama-antibiotics? Noma uye wavakashela indawo yokwamukela nodokotela wamazinyo owadonsa ikona yomlomo wakhe ngezinsimbi? Noma mhlawumbe ugqoke uhlelo lwe-bracket? Impendulo ayiyona ebaluleke kakhulu, into esemqoka ukuvimbela ukutheleleka okuphazamiseke kuze kube yilapho isakazeka embranini emlonyeni yomlomo futhi ingangeni emphinjeni.
»Thinta ithebulethi ye-isatin noma i-levorin, engeza i-pinch ye-soda namanzi amancane abilisiwe ukuze wenze unamathisele obunzima. Faka isicelo endaweni ebuhlungu 3-4 izikhathi ngosuku.
"Sebenzisa i-ortatin noma i-levorin amafutha. Ngemuva kwesonto uzokhohlwa ngalezi zindaba!
Ngokujwayelekile zivela ezinganeni. Nokho, ngezinye izikhathi i-thrush iya emlonyeni womuntu omdala. Njengomthetho, lokhu kwenzeka ngesikhathi sokubuthakathaka ukuvikelwa komzimba ngemva kwesifo noma ukungena okulawulwayo kwama-antibiotic. Ungalokothi uzinqobe ngokwakho, ngaphandle kokubonisana nodokotela! I-Candida ngeke ihluleke ukusizakala ibhalansi eliphazamisekile phakathi kwabakhamuzi ezincane emkhakheni womlomo!
Ngaphandle kwamafilimu amhlophe esibhakabhakeni, izinsini nolimi, i-thrush ingabangela ukuvuvukala okungapheli kwodonga lwe-pharyngitis (i-pharyngitis), amathani (angina), angena ezindlebeni, abange i-otitis. Ngenkathi ngayinye enjalo udokotela uzoyiqaphela! Akuvumelekile neze ukuzimela: ngaphandle kokuba uchwepheshe, kulula ukulahlekelwa futhi uvumele amakhowe ukuba aphumule alulame izibhulo ezintsha ezintsha emzimbeni, angena ezingxenyeni zangaphakathi. Awukwazi ukuvumela lokhu!
"Udinga ukususa amafilimu amhlophe ezigwini, isibhakabhaka nolimi nge-cotton swabs enesisombululo soda (0.5 isipuni ngasinye indebe yamanzi abilisiwe), i-borax ku-glycerin (ithengiswe ekhemisi) noma u-10% we-tincture we-poplar buds (25- 30 amaconsi egilabheni lamanzi abilisiwe). Le tincture efanayo uhlanza umphimbo wakho.
"Sebenzisa i-decoction ye-oak bark, ukumiswa kwe-nettle (indlela yokulungiselela iboniswa ephaketheni) noma isisombululo esibuthakathaka se-hydrogen peroxide (isipuni esibukileni samanzi abilayo) for rinses.
"Ukunciphisa amabhulashi amazinyo okukhuni, ukulimaza izinsini, ubuso bamathunga nolimi. Shayela ushintsho njalo ezinyangeni ezintathu.
"Kungcono uphefumule ikhala lakho! Uma uphefumulela emlonyeni, i-membrane emangcwabeni yomlomo isomile. Ilahlekelwa ikhono lokulwa nokutheleleka kwe-fungal. I-lowtick-lipstick ne-nicotine iyithinta kakhulu kabi.
Naphezu kokubonakala sengathi "ukufutheka" kwe-thrush - izimbangela, izimpawu, ukwelashwa akulula kunezinye izifo. Ukukhwehlela akukwazi ukunakwa - lokhu kungaphephile futhi kungashintsha inhlekelele yangempela. Akunakwenzeka ukuthi yilokho okudingayo. Akusikho lokho ...?
Ukuhlaziya ulimi ngo-dysarthria
I-Varicose veins, izindlela zokwelashwa
Umdlavuza wesibeletho, isisu esibi
Izitshalo zokwelapha, ukwelashwa kwemithi yokwelashwa
Siphila ngenjabulo: izimiso ezinhlanu zokuqinisa ukuzivikela
Gwema isisindo nge-bath soda
Ama-hormone ayimqoka wabesifazane
Isobho le-barley ye-mushroom ne-pearl
I-Cheddar Ushizi Soup
Manicure Lunar: ubani ofanele nokuthi ungayenza kanjani wena
Izibindi ezindebe: izimbangela nezindlela zokulahlwa
Zokupheka ezilula ze-sauerkraut
Indima yamaminerali kubantu
U-Angelina Jolie noBrad Pitt baya emhlanganweni wetiyi no-Prince William
I-appetizer esiphundu ye-brynza namantongomane
Incazelo ye-Yorkshire Terrier
Yini engayitshela umuntu ngengxenye yomuntu
I-Milkshake nge-chocolate ne-mint
Ubuso bangempela buka Lady Gaga
Uramaki nge-saumoni ku-sesame
Indlela yokuthola ukudla